Download Myanmar font applications - Android - Appszoom
Myanmar font Applications for Android
» Myanmar font
Free • 228.2K 7.9
မြန်မာစာမမှန်တဲ့ ဖုန်းတွေကို မြန်မာစာအမှန်မြင်ရ ဖတ်ရအောင် အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Myanmar
. ဖုန်းကို Root လုပ်ပြီးပါက မြန်မာဖောင့်ချိန်းရန် MM Aio Font Chaninger 4. မြန်မာစာရေ
Myanmar Keyboard. Bagan Keyboard is compatible with Zawgyi Font, Unicode Font, Myanmar Font, Burmese Font
memory • Work without installing Myanmar font nor Internet • Customize app background & adjust font
Notes: -This keyboard encourage you to uses Unicode standard instead of Zawgyi. http://my.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Font
ပြသေးတဲ့ ဖုန်းတွေရှိသေးရင် နောက်ဗားရှင်းမှာ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မူရင်း Font ဖန်တီးသူမ
"Myanmar Tagu Font" Root မလိုထည့်သွင်း မြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းမ
Mi ဖုန်းအားလုံးကို Root မလို One Click ဖြင့် မြန်မာဖောင့်သွင်းနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ မြန်မာစာအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ဖုန်းပိတ်သွားလည်း မြန်မာဖောင့်မပျောက်ပါဘူး မြန်မာဖောင့်ကို အပြီးထည့်ပေးပါတယ်။ မြန်မာလွဲနေတာတွေ မဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ချက်ထဲနဲ့ မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင်းနိုင်တာကြောင့် Mi ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူများ ဆောင်ထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
"Myanmar Warso Font" Root မလိုထည့်သွင်း မြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းမ
အရမ်းလန်းတဲ့ နေရာတိုင်းသုံးစွဲနေကြတဲ့ မြန်မာစာလုံးအလှ သုံးချင်သူများအတွက်.. Myanmar Custom Font
ပြုနည်း.. ဒီဖောင့်အလှ (၁၀) မျိုးအနက် မိမိအသုံးပြုလိုသော ဖောင့်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Install Font လုပ်ပါ။ ပြီးလ
ွဲနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရန် ဖောင့်သွင်းမည် ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Myanmar (iFont) ကို Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ဖောင့်ေ
ဖုန်းတစ်လုံး လုံးကို တစ်နေရာမကျန် မြန်မာစာအကုန်မှန်အောင် ထည့်သွင်းချင်သူများ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးမှာ မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း (၈) မျိုးကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ မြန်မာစာ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဖုန်းများ ဆော့ဝဲလေးကို ဒေါင်းပြီး ကိုယ်တိုင်ဘဲလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ..
*Calculate in Burmese Font and Burmese Language. All the input key and output are in Myanmar number
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေတွက် Myanmar Font Root ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေး ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ယခု ဆော့ဝဲလ် မှာ Android
ွင်းနိုင်ပါသည်။ မြန်မာစာ ကပ်နေတာတွေ လွဲနေတာတွေအတွက်လည်း မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ Use Custom Font နေရာတွင် မိမိ
ပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့ဖောင့်အလှလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါ။ အရင်က iFont တွေ HiFont တွေကိုဖုန်းဗားရှင် 5.0 အထက်တွေမှာဖောင့်ချိန်းလို့မရပါ။ အခုဒီကောင်လေးကတော့ ခ
Download Myanmar font applications - iPhone